Poyais, Famitahana Tamin’ny Taonjato Faha-19 Mitoetra Ho Anisan’ny Miavaka Indrindra Tamin’ny Tantara · Global Voices teny Malagasy
Poyais, Famitahana Tamin'ny Taonjato Faha-19 Mitoetra Ho Anisan'ny Miavaka Indrindra Tamin'ny Tantara
MpanoratraGabriela Garcia Calderon Orbe
Nandika (en) i Gabriela García Calderón
Voadika ny 06 Marsa 2016 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, عربي, Español
Kisoritsoritry ny Moron'ny Moka ao amin'ny lazaina ho sisintanin'ny Poyais. Sary avy amin'ny Wikipedia, azon'ny rehetra ampiasaina.
Raha nieritreritra ianao fa an'ny jiolahy sy ny governemanta amin'izao fotoana izao izany fahatafintohinana nateraky ny kolikoly izany dia ho anao ity tantara ity. Nanodidina ny taona 1820 tany ho any, Ny Jeneraly Ekaosey Gregor MacGregor, manamboninahitry ny tafika izay niasa tamim-piavahana tamin'ny Adim-Pahaleovantena Venezoelana, dia nanonona ny tenany ho mpanjaka teratanin'ny Poyais, firenena sandoka iray ao Amerika afovoany noforonin'ny tenany hanaovana famitahana, ka tafiditra amin'izany ny fivarota-tany tamin'ireo Ekaosey hafa.
Ity no fehin'ny tantaram-pamitahana nolazainy, araka ny lazain'ny blaogy El hombre lobo (IIay Lehilahy Amboadia):
Manamboninahitry ny tafika nanangona voninahitra avy amin'ny tafika britanika, paortigey ary venezoelana i MacGregor. Rehefa nanao asa miaramila maro izy dia tonga tao amin'ny faritra morondranomasina Nikaragoiana iray anjakan'ny vahoaka teratany Poyais izay nanaovany fifanarahana “fanjanahantany” […ary] tamin'ny fianteherana amin'ny lazaina ho loharanonkarena voajanahary avy amin'ny Poyais, dia nanomboka namoaka taratasin-trosa manana zanabola 6%, iantohan'ny Fanjakan'ny Poyais izy.
Nohazavain'ny mpanoratra ny bilaogy ihany koa ny toe-javanisy tamin'izany fotoana izany sy ny nahatonga ny olona maro ho tratran'ny vela-pandriky ny fisolokiana:
Tsy maintsy mametraka ny tenantsika ao anatin'izany fotoana iray amin'ny tantara izany isika. Taona 1822 no resahantsika, raha vao miana-mandeha eo amin'ny sehatra manerantany amin'ny maha-firenena vaovao azy ireo ny firenena zanatany espaniola teo aloha, izay mbola manana otrikarena goavana ary nila vola hananganana fototrafitrasa ny firenena maro manana loharanon-karena mahatalanjona ary ny tombontsoa nampanantenaina dia avoko kokoa noho izay natolotra tany Eoropa.
Tranonkalam-baovao Hondioranina iray El Heraldo nisintona ny tantara avy ao:
ilay lazaina fa toerana misy ny Poyais tao Amerika afovoany. Sary avy amin'ny Wikipedia, namboarin'ny mpanoratra. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Tamin'ny Septambra 1822, nisy zavatra nahavariana nitranga tao amin'ny seranan'i London: nampakatra ny vatofantska ny sambo Honduras Packet niaraka tamin'ireo ho voanjo 70, izay ahitana dokotera sy mpahay lalàna vitsivitsy ary mpanao banky iray, ka nitodi-doha tany amin'ny Fanjakan'i Poyais […].
Saingy rehefa tonga tany amin'ny morondranomasin'i Atlantikan'i Honduras ry zareo, ny hitany dia ala tsy maha-te-honina izay mitondra aretina kokoa fa tsy volamena, izay tena nifanohitra indrindra tamin'izay nampanantenain'i Gregor McGregor [sic] azy ireo. Nanambara ny tenany ho mpanjaka teratanin'ny Poyais ity kingalahin'ny famitahana ity, rehefa nanoloatra tany midadasika dia midadasika ho azy (sahabo ho 32.000 km²) hahafahany manorina fanjakana entin'olon-tokana ny “mpanjaka” Miskito Frederik Augustus tamin'ny 1820, nefa ny tena marina dia ity no soloky iraisampirenena goavana indrindra tamin'ny taonjato faha-19. Tamin'ireo voanjo 240 tonga tao Poyais, dia maty ny atsasany, ny hafa niverina nody tany London na nidina nankany Belize.
Fandinihana sy fijerena ireo lasibatra: Lakilen'ny fandraharahana vaventy
Marika Ampingan'ny Poyais. Sary avy amin'ny Wikipedia. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Toa tsara loatra raha marina ny fampanantenan'i MacGregor, toy ny hoe mora mandray olona ireo teratany, lonaka dia lonaka ny tany, ary maro dia maro ny volamena, saingy niezaka hatrany izy ny hamitaka ireo manamboninahitry ny tafika tsy maharitra, dokotera maromaro ary mpanao banky iray. Ahoana ny nanaovany izany? Nanandrana nitady valiny iray ny gazetiboky The Economist :
Mety hanome ny ambangovangon'izany ny Fikarohana nataon'i Tamar Frankel tao amin'ny Oniversiten'i Boston:
Frankel studied hundreds of financial cons, looking for recurring patterns. A set that pops up time and time again describes the traits of the victims. They tend to be excessively trusting, have a high risk tolerance, and—especially the more educated victims—have a need to feel exclusive, or part of a special group. […] Some feel envious of their economic neighbours, which can lead to greedy, risky investing.
Nohadihadian'i Frankel ireo mpamitaka ara-bola anjatony, itadiavana izay tranga mpiverimberina. Ny zavatra iray mpitranga hatrany dia mamelabelatra ny momba ireo lasibatra. Matetika izy ireo no matoky loatra, manana fahazakàna ambony dia ambony, ary ireo lasibatra nahita fianarana ambony kokoa- dia te-hiavaka hanana samirery, na anatin'ny vondron'olona iray manokana. […] Mialona amin'ny toekaren'ny manodidina azy ny sasany, ka mahatonga azy ireo ho any amin'ny fampiasambola be sy sahisahy loatra.
Ny firenena noforonin'i MacGregor io aza dia manana ny volany manokana ara-dalàna. Tamin'ity vola taratasy tsy misy ilaina azy ity no namitana ny fifampiraharahana ary ireo nitady harena ampitan(ny ranomasimbe dia nandoa izany tamin'ny vola britanika.
Vola taratasy iray dôlara an'ny Bankin'ny Poyais, nampiasain'i McGregor hanaovana fifanakalozam-barotra amin'ny vola britanika. Sary nalaina avy amin'ny Wikipedia. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Roanjato taona latsaka taty aoriana, mbola miresaka momba ny Poyais ihany ny olona manerana ny glaoby. Mijery indray ny tantara ireo sehatra mpampita vaovao.
Gregor MacGregor, “printsin'ireo Poyais”: maherifon'ny fahaleovantena sady mpisoloky.
Soloky feno fahasahiana indrindra teo amin'ny tantara
Misy aza moa ny mpiseraseran'ny aterineto mampifandray an'i MacGregor amin'ny ankehitriny, tahaka ity sioka miresaka momba an'i “JOH”, na Juan Orlando Hernández, izay filohan'i Honduras amin'izao fotoana izao:
Poyais angamba ilay Honduras amidin'i JOH… azo itokisana fa taranak'ilay Ekosey mpamitaka iny izy.
Niezaka ny handositra ny fanasaziana azy noho ny fitaka nataony i MacGregor. Nodimandry tao Caracas izy tamin'ny 4 Desambra 1845, ary nalevina araka ny fanomezam-boninahitra feno ny miaramila tao amin'ny Katediralin'i Caracas.
23 Jona 2021Angola
19 Jona 2021Borkina Faso
14 Jona 2021Soeda
Soeda: Nivoaka gazety ny bilaogy ho an'ny Ramadany